အာရုံစူးစိုက်မှု span လျော့ကျလာဖြစ်ကြောင်းပြောရပ်တန့်, သူတို့မဟုတ်ပါ! | Martech Zone
ကျနော်တို့ snackable အကြောင်းအရာနောက်လူတစ် ဦး ကဲ့သို့ပင်ချစ်ပေမယ့်ကျွန်တော်တို့ရဲ့စက်မှုလုပ်ငန်းအတွက်ကြီးမားတဲ့အယူအဆမှားရှိတယ်ယုံကြည်ပါတယ်။ အဆိုပါအယူအဆ အာရုံစူးစိုက်မှု span လျော့ကျလာနေကြသည် ပတ်ပတ်လည်ထားအချို့သောအခြေအနေတွင်လိုအပ်သည်။ ပထမ ဦး စွာငါလာမယ့်ဝယ်ယူမှုဆုံးဖြတ်ချက်အတွက်လူများသည်သူတို့ကိုယ်သူတို့ပညာပေးဖို့စွမ်းအင်နည်းတယ်ဆိုတာလုံးဝသဘောမတူဘူး။
သုတေသနမလုပ်မီအချိန်များစွာကုန်လွန်ခဲ့သောသုံးစွဲသူများနှင့်စီးပွားရေးလုပ်ငန်းများသည်ယခုအချိန်တွင်သုတေသနများစွာကိုလုပ်နေဆဲဖြစ်သည်။ ငါပြေးတယ် analytics အစီရင်ခံစာများ ကျွန်တော်တို့ရဲ့ဖောက်သည်များအားလုံးကိုဖြတ်ပြီး ဒီ post အတွက်ပြင်ဆင်မှုအတွက်တစ်ခုချင်းစီတစ်ခုသည်စာမျက်နှာပေါ်တွင်အချိန်ပိုသုံးစွဲပြီးလွန်ခဲ့သော ၁ နှစ်မှ ၂ နှစ်နှင့်နှိုင်းယှဉ်လျှင် session တစ်ခုစီအတွက်အချိန်ကုန်လွန်ခြင်းများစွာရှိသည်။ ကျွန်ုပ်တို့သည်အကြောင်းအရာများကိုပိုမိုနက်ရှိုင်းစွာသုတေသနပြုနေပြီးကျွန်ုပ်တို့ပိုမိုနက်ရှိုင်းစွာရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုအပေါ်ပိုမိုကောင်းမွန်သောအကျိုးအမြတ်များကိုမြင်တွေ့ရသည်။
အဘယ်အရာကိုပြောင်းလဲသွားသည်အာရုံကိုသက်တမ်းရှည်သည်မဟုတ်, အကြောင်းအရာရှာဖွေတာအတွက်အားထုတ်မှုပါပဲ။ ရှာဖွေသူတွေဟာသူတို့ရှာဖွေနေတာကိုအလျင်အမြန်ဖော်ထုတ်နိုင်ဖို့ကျွမ်းကျင်သူတွေကြိုးစားနေကြပါပြီ။ သူတို့မမြင်ရရင်သူတို့ထွက်သွားကြတာ။ သို့သော်၎င်းကိုရှာတွေ့ပါက၎င်းတို့သည်ဖတ်ရှုခြင်း၊ သုတေသနပြုခြင်းနှင့်မျှဝေခြင်းအတွက်အချိန်များများပေးသည်။
သင့်ခေါင်းစဉ်များသည်သင့်အကြောင်းအရာနှင့်မကိုက်ညီပါ သင်ကလူတွေကိုဆွဲဆောင်ဖို့ linkbait နည်းစနစ်တွေကိုသုံးနေတယ်၊ ​​ပြီးတော့အကြောင်းအရာကသိပ်မများတော့၊ ဒါကဘယ်သူ့ကိုမှမစွန့်ခွာနိုင်ဘူး။
သင်မှားယွင်းသောအကြောင်းအရာအဘို့အ optimizing ပါတယ်။ သင်၏ ၀ က်ဘ်ဆိုဒ်တွင်သင်၌အခွင့်အာဏာမရှိသောသော့ချက်စာလုံးများပေါင်းများစွာကိုတွေ့ရှိခြင်းသည်သင်၏အရှိန်နှုန်းကိုတိုးမြှင့်စေပြီးသင့်ဆိုဒ်တွင်သုံးစွဲရသောအချိန်ကိုလျှော့ချနိုင်သည်။ ပစ်မှတ်ပေါ်တွင်ရေးပါ - အခါတိုင်း!
ညံ့ဖျင်းသော optimized paid campaign များဖြင့်သင်မြှင့်တင်နေသည်။ သင်၏ site သို့လာရောက်လည်ပတ်သူအသစ်တိုင်းသည်ပြန်လာသည့်ရှေးခေတ်လူများထက်အချိန်နည်းပါးလိမ့်မည်။ campaign ည့်သည်အသစ်များသူတို့လိုအပ်သည့်အရာကိုရှာဖွေ (သို့မဟုတ်မတွေ့ပါက) စည်းရုံးလှုံ့ဆော်ရေးများကိုဖွင့်ထားခြင်းသည်ဆိုဒ်ပေါ်တွင်အချိန်အတော်အတန်ကျဆင်းသွားနိုင်သည်။
သတင်းအချက်အလက်များ၊ တင်ဆက်မှုများ၊ ebooks၊ စာရွက်စာတမ်းများ၊ ဖြစ်ရပ်မှန်လေ့လာမှုများ၊ ထောက်ခံစာများ၊ ရှင်းလင်းပြတ်သားသောဗီဒီယိုများ၊ အပြန်အလှန်တုံ့ပြန်သည့်ကိရိယာများစသည်တို့ကဲ့သို့ပိုမိုနက်ရှိုင်းသောထိတွေ့ဆက်ဆံမှုကိုဖြစ်စေသည့်အကြောင်းအရာဗျူဟာများတွင်သင်ရင်းနှီးမြှုပ်နှံခြင်းမရှိပါ။
Snackable ပါဝင်မှုသည်ဖြန့်ချိရန်မဟာဗျူဟာမဟုတ်ပါ၊ အဘယ်ကြောင့်ဆိုသော်အာရုံစူးစိုက်မှုအကန့်အသတ်မှာလျော့နည်းလာသောကြောင့်ဖြစ်သည် Snackable content များသည်လူတို့၏ site ကိုလူများသက်ဆိုင်ရာခေါင်းစဉ်များသို့ ဦး တည်စေသည့်မုန့်ဖုတ်များဖြစ်သည်။
စာမျက်နှာသို့မဟုတ် site ပေါ်တွင်ပြောင်းလဲမှုများနှင့်အချိန်ကိုခွဲခြမ်းစိတ်ဖြာရန်သင့်အားငါစိန်ခေါ်လိမ့်မည်။ သင်ပြောင်းလဲသည့်အကြောင်းအရာသည်ရှည်လျားသောပုံစံရှိသေးသည်ကိုသင်တွေ့လိမ့်မည်။ အခြေခံသုတေသန၊ အဖြူရောင်စာရွက်များ၊ ဖြစ်ရပ်မှန်လေ့လာမှုများနှင့်အသေးစိတ်အချက်အလက်များကြွယ်ဝသောဘလော့ဂ်ပို့စ်များသည် ဆက်လက်၍ စေ့စပ်ညှိနှိုင်းမှုကိုဆက်လက်ဖြစ်ပေါ်စေပြီးပြောင်းလဲမှုများကိုဖြစ်ပေါ်စေသည်။
သင်၏တိုးတက်မှု အကြောင်းအရာစျေးကွက်နည်းဗျူဟာ စားသုံးသူ (သို့) စီးပွားရေးလုပ်ငန်းများသည်ပိုမိုစိတ်ဝင်စားလာသည်နှင့်အမျှလိုအပ်သောသုတေသနများကိုပိုမိုနက်ရှိုင်းစွာလေ့လာနိုင်ရန်ထိတွေ့ဆက်ဆံမှုအဆင့်အမျိုးမျိုးအတွက်အကြောင်းအရာများကိုတည်ဆောက်ခြင်းပါဝင်သင့်သည်။
snackable အကြောင်းအရာက၎င်း၏နေရာရှိသည်, ဒါပေမယ့်သူကအာရုံစူးစိုက်မှုတိုတောင်းသောသက်တမ်းမဟုတ်ပါဘူး။ minimal ည့်သည်များကိုပိုမိုနက်ရှိုင်းစွာဆွဲဆောင်ရန်အနည်းငယ်မျှအားထုတ်မှုနှင့်ကျယ်ပြန့်သောပရိသတ်များအတွက်ဖြစ်သည်။ တကယ့်ငါးစာသည်သင့်ပစ်မှတ်ကိုစောင့်မျှော်နေစဉ်တွင်ရေသည်တဟုန်ထိုးစီးဆင်းနေသည်။
ဤအချက်ကိုစိတ်ထဲ ထား၍ Oracle မှသတင်းအချက်အလက်သည် snackable content မဟာဗျူဟာများကိုကောင်းမွန်စွာထိုးထွင်းသိမြင်နိုင်သည်။
Tags: infographicOracle ကsnackable အကြောင်းအရာအချိန်စာမျက်နှာပေါ်တွင်အချိန်site ပေါ်တွင်အချိန်session ထဲမှာသုံးစွဲအချိန်စာမျက်နှာပေါ်တွင်သုံးစွဲအချိန်site ပေါ်တွင်သုံးစွဲအချိန်
Salesforce စျေးကွက်ရှာဖွေရေးတိမ်တိုက်ကနေ 2014 ခုနှစ်စျေးကွက် Stats
ဒီဇင်ဘာ 24, 2014 မှာ 8: 59 AM
ဝဘ်လာရောက်လည်ပတ်သူများသည် လွန်ခဲ့သော 1 နှစ်မှ2နှစ်ကထက် သင့်ဖောက်သည်၏ စာမျက်နှာများကို လေ့လာချိန်ပိုမိုသုံးစွဲကြောင်းကြားရသဖြင့် ကျွန်ုပ်စိတ်သက်သာရာရမိပါသည်။ ယနေ့ခေတ် အသံကိုက်မှုများ၏ ကမ္ဘာတွင်၊ ၎င်းသည် တွေးခေါ်မြုပ်နှံပြီး ကောင်းမွန်စွာ သုတေသနပြုထားသော အကြောင်းအရာများကို ဖန်တီးရန် အချိန်ကို မြှုပ်နှံမည်ဟု ယုံကြည်သော ကျွန်ုပ်တို့အတွက် ကောင်းမွန်ပါသည်။
ဒီဇင်ဘာ 29, 2014 မှာ 9: 56 AM
ဒါက တောက်ပတယ်။ သတင်းအချက်အလက်ကြွယ်ဝပြီး ရှည်လျားတဲ့အကြောင်းအရာတွေရဲ့ အရေးပါမှုကို မလျော့သွားတဲ့အတွက် ဝမ်းသာမိပါတယ်။
လူကြိုက်များသော ယူဆချက်များကို စိန်ခေါ်သည့် တစ်စုံတစ်ဦးသည် ထူးခြားပြီး ရဲရင့်စွာ တောင်းဆိုသည့်အခါ ၎င်းကို သဘောကျပါသည်။